ဘာလုခါလီ ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ မြင်ကွင်းတခု။ (သြဂုတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၈)
ဒီနှစ် ကုသမဂ္ဂအထွေထွေညီမလာခံမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအပေါ် စွပ်စွဲပြောဆိုချက်တွေဟာ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ သတင်းမှားတွေသာဖြစ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ဒေါသတကြီး တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ (၇၅) ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအနေနဲ့ နယ်စပ်မြို. Cox’s Bazar က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလက်ခံကူညီထားတယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့တာကို ခုလို တုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အဆင်မြင့်အရာရှိကြီးတစ်ဦးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအနေနဲ့ ဘယ်လို အကြမ်းဖက်သမားကိုမှ သူ့နယ်မြေထဲ လက်ခံတာမရှိဘူး။ ဝန်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina အစိုးရအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မူကို လုံးဝလက်မခံတဲ့ မူဝါဒရှိထားတယ်၊ မြန်မာအနေနဲ့ ကိုယ့်ပြဿနာ ကိုယ်ပြန်ကြည့်သင့်တယ်လို့ တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဦးကျော်တင့်ဆွေဘက်ကနေ၊ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်မှာ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ နှစ်ဖက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မူအပေါ်သာ မူတည်တယ်လို့ ဒီကုလညီလာခံမှာ ပြောခဲ့တာကအပေါ်လည်း၊ ဒါက နှစ်ဖက်ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ မြန်မာဘက်ကသာ ဒုက္ခသည်တွေပြန်လာချင်အောင် လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ချေပလိုက်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina ကလည်း ဒီညီလာခဲ့မှာ မိန့်ခွန်းပြောရာမှာ ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကလူတွေ ထွက်ပြေးလာတဲ့ပြဿနာကို မြန်မာအစိုးရကသာ ဖန်တီးခဲ့တာမို့၊ မြန်မာဘက်ကပဲ အဖြေရှာမှရမယ်၊ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့တော့ အကောင်းဆုံးအဖြေရနိုင်ဖို့ ဝိုင်းကူပေးသင့်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို တရားဝင်လက်မခံပေမဲ့၊ ဒီဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လာရေးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော အကွမျးဖကျသမားတှေ လကျခံထားတယျဆိုတဲ့ မွနျမာ ပွောဆိုမှု ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ပယျခြ
ဒီနှဈ ကုသမဂ်ဂအထှထှေညေီမလာခံမှာ မွနျမာနိုငျငံကိုယျစား ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အပျေါ စှပျစှဲပွောဆိုခကျြတှဟော အခွအေမွဈမရှိတဲ့ သတငျးမှားတှသောဖွဈတယျလို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဘကျက ဒေါသတကွီး တုံ့ပွနျလိုကျပါတယျ။
လကျရှိကငျြးပနတေဲ့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ (၇၅) ကွိမျမွောကျအထှထှေညေီလာခံမှာ မွနျမာနိုငျငံ အတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီးဌာန ဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ့ဆှကေ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အနနေဲ့ နယျစပျမွို. Cox’s Bazar က ဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော အကွမျးဖကျသမားတှကေိုလကျခံကူညီထားတယျလို့ စှပျစှဲခဲ့တာကို ခုလို တုံ့ပွနျလိုကျတာပါ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ အဆငျမွငျ့အရာရှိကွီးတဈဦးက ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အနနေဲ့ ဘယျလို အကွမျးဖကျသမားကိုမှ သူ့နယျမွထေဲ လကျခံတာမရှိဘူး။ ဝနျကွီးခြုပျ Sheikh Hasina အစိုးရအနနေဲ့ အကွမျးဖကျမူကို လုံးဝလကျမခံတဲ့ မူဝါဒရှိထားတယျ၊ မွနျမာအနနေဲ့ ကိုယျ့ပွဿနာ ကိုယျပွနျကွညျ့သငျ့တယျလို့ တုံ့ပွနျလိုကျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဦးကြျောတငျ့ဆှဘေကျကနေ၊ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျပွနျပို့ရေးအစီအစဉျမှာ မွနျမာနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့တို့ နှဈဖကျပူပေါငျးဆောငျရှကျမူအပျေါသာ မူတညျတယျလို့ ဒီကုလညီလာခံမှာ ပွောခဲ့တာကအပျေါလညျး၊ ဒါက နှဈဖကျပွဿနာမဟုတျဘူး။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ပွဿနာလညျးမဟုတျဘူး၊ မွနျမာဘကျကသာ ဒုက်ခသညျတှပွေနျလာခငျြအောငျ လုပျပေးရမှာဖွဈတယျလို့ ပွနျခပြေလိုကျပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဝနျကွီးခြုပျ Sheikh Hasina ကလညျး ဒီညီလာခဲ့မှာ မိနျ့ခှနျးပွောရာမှာ ဒီရခိုငျပွညျနယျကလူတှေ ထှကျပွေးလာတဲ့ပွဿနာကို မွနျမာအစိုးရကသာ ဖနျတီးခဲ့တာမို့၊ မွနျမာဘကျကပဲ အဖွရှောမှရမယျ၊ နိုငျငံတကာအနနေဲ့တော့ အကောငျးဆုံးအဖွရေနိုငျဖို့ ဝိုငျးကူပေးသငျ့တယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာအစိုးရဘကျကတော့ ဒီရိုဟငျဂြာဆိုတဲ့အသုံးအနှုနျးကို တရားဝငျလကျမခံပမေဲ့၊ ဒီဒုက်ခသညျတှေ ပွနျလာရေးတော့ ဆောငျရှကျပေးနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။